Akụkọ - Condenser Evaporative
A na-eme ka condenser nke evaporative dị elu site na ụlọ elu dị jụụ. Operationkpụrụ ọrụ ya bụ otu ihe ahụ dị ka nke ụlọ elu jụrụ oyi. Ọ na-tumadi ekewet okpomọkụ Exchanger, mmiri mgbasa usoro na-akwado usoro. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-adabere na nsị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ezi uche mgbanwe mgbanwe. Usoro nkesa mmiri nke dị n'elu condenser na-aga n'ihu na-agba mmiri jụrụ oyi na-etolite ihe nkiri mmiri n'elu ikpo ọkụ ọkụ ọkụ, Mgbanwe ọkụ ọkụ nwere ezi uche na-adị n'etiti ọkpọkọ mgbanwe okpomọkụ na mmiri ọkụ na tube ahụ, yana ọkụ a na-ebufe ya na mmiri dị jụụ n'èzí ọkpọkọ. N'otu oge ahụ, mmiri jụrụ oyi dị n'èzí ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na ikuku, mmiri mmiri ahụ na-ewepụta okpomọkụ nke evaporation (ụzọ bụ isi nke mgbanwe ọkụ) na ikuku maka obi jụrụ, nke mere na ọnọdụ odide nke okpomọkụ nke mmiri dị nso na mmiri bọlbụ mmiri nke ikuku, na ọnọdụ odide ya nwere ike ịbụ 3-5 ℃ ala karịa nke ụlọ elu jụrụ oyi nke mmiri na-ekpo ọkụ.
1. Ezi odide mmetụta: nnukwu latent okpomọkụ nke evaporation, elu okpomọkụ nyefe arụmọrụ nke agbara eruba nke ikuku na refrigerant, evaporative condenser ewe ihere mgbochi mmiri bọlbụ okpomọkụ dị ka ndị na-akwọ ụgbọala ike, na-eji latent okpomọkụ nke evaporation nke mmiri film na eriri igwe na-eme okpomọkụ odide dị nso na gburugburu mmiri bọlbụ mmiri, na ọnọdụ odide ya nwere ike ịbụ 3-5 ℃ ala karịa nke ụlọ elu jụrụ oyi nke mmiri na 8-11 ℃ dị ala karịa nke usoro ikuku ikuku, nke na-ebelata nke ukwuu ike oriri nke Compressor, Mmetụta ike arụmọrụ nke usoro ahụ na-abawanye site na 10% -30%.
2. Water ịzọpụta: na evaporation latent okpomọkụ nke mmiri na-eji maka okpomọkụ mgbanwe, na-ekesa mmiri oriri dị obere. Tụle igbu efepụ na nsị mmiri mgbanwe, mmiri oriri bụ no.5% -10% nke n'ozuzu mmiri-mma condenser.
3. Ike nchekwa
Igwe na-ekpo ọkụ nke evaporative condenser na-ejedebe site na ikuku ikuku bọlbụ ikuku, na mmiri ọkụ bọlbụ n'ozuzu ya bụ 8-14 ℃ ala karịa ọkụ ọkụ bọlbụ. Agbakwunyere gburugburu ebe obibi na-adịghị mma nke onye ofufe ahụ dị n'elu mere, ọnọdụ ikuku na-eme ka ala dị ala, yabụ ike oriri nke compressor dị obere, na ike oriri nke fan na mmiri mgbapụta nke condenser dị ala. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ condenser, evaporative condenser nwere ike ịzọpụta 20% - 40% ike.
4. Obere ego na arụmọrụ na-efu: evaporative condenser nwere kọmpat Ọdịdị, ọ dịghị mkpa ụlọ elu jụrụ oyi, nọ ọdụ obere mpaghara, ọ dịkwa mfe ịmepụta otu dum n'oge nrụpụta, nke na-eweta nkasi obi na ntinye na ndozi.